Nanana Finoana i Abela | Tahafo ny Finoan’​izy Ireo
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Catalan Cebuano Chichewa Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Grika Groenlandey Guarani Géorgien Haoussa Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kwangali Letonianina Litoanianina Luo Malagasy Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Ndebele Ndonga Norvezianina Nzema Oromo Pangasinan Papiamento (Aruba) Poloney Portogey Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tiorka Tseky Tsonga Twi Télougou Venda Vietnamianina Wolaita Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
VARIANA erỳ i Abela mandinika ny ondriny miraoka ahitra tsy amin’ahiahy eny an-tampon-kavoana. Mitazan-davitra angamba izy avy eo, dia mahita toerana misy hazavana manjavozavo kely. Fantany hoe eo no misy ny fidirana mankao amin’ny zaridainan’i Edena. Misy lelan-tsabatra mirehitra sy mihodinkodina tsy an-kijanona eo misakana ny olona tsy hiditra any. Tao ny dada sy mamany no nipetraka taloha saingy tsy misy afaka mankany intsony izao ry zareo. Efa harivariva ny andro. Alao sary an-tsaina i Abela miandrandra ny lanitra ary tsotsofin’ny rivotra ny volony. Lasa saina izy hoe asa raha ho afaka hihavana amin’ilay Andriamanitra Mpamorona indray ny olona any aoriana any. Izany mantsy no mba iriny!
I Abela no zanakalahin’i Adama faharoa. Milaza ny Baiboly fa toy ny miteny amintsika i Abela izao. Mety hilaza anefa ianao hoe ‘Aiza koa no hisy an’izany?’ Efa ho 6 000 taona tokoa mantsy izay i Abela no maty, ka na ny taolambalony aza efa lasa vovoka. Ny Baiboly rahateo milaza fa “tsy mahalala na inona na inona” ny maty. (Mpitoriteny 9:5, 10) Tsy misy tenin’i Abela mihitsy koa ao amin’ny Baiboly, ka ahoana no ahafahany miteny amintsika?
Nahazo herin’ny fanahy masina ny apostoly Paoly ka nilaza toy izao momba an’i Abela: “Na efa maty aza izy dia mbola miteny ihany.” (Hebreo 11:4) Nahoana izy no lazaina fa mbola miteny? Nasehony fa tena nanam-pinoana izy ka toy ny hoe hitantsika maso mihitsy ny zavatra nataony ary azontsika tahafina. Izy no olombelona voalohany nanana an’izany toetra miavaka izany. Raha miezaka hahafantatra izay nataony isika ary manahaka azy, dia toy ny hoe henontsika mihitsy izy miteny amintsika.
Tsy dia miresaka an’i Abela anefa ny Baiboly. Ahoana àry no ahalalantsika ny momba azy sy ny fomba nanehoany finoana?
Mbola vitsy kely ny olona teto an-tany tamin’i Abela teraka. Nilaza i Jesosy tatỳ aoriana fa tamin’ny “nanorenana izao tontolo izao” no nisy i Abela. (Lioka 11:50, 51) Azo antoka fa izay olona mbola azo afahana amin’ny ota no tian’i Jesosy holazaina tamin’ilay hoe izao tontolo izao. I Abela no olona fahefatra nisy teto an-tany, nefa toa izy no voalohany hitan’Andriamanitra hoe azo nafahana tamin’ny ota. * Tsy mba nisy olona tsara azon’i Abela notahafina mihitsy àry tamin’izy mbola kely.
Vao haingana tamin’izay no niandoha ny tantaran’olombelona. Efa hiatrika zava-manahirana be sahady anefa izy ireo. Azo antoka fa tsara tarehy sy navitribitrika i Adama sy Eva. Nanao zavatra ratsy be anefa ry zareo ary fantany tsara izany. Lavorary izy ireo taloha ary afaka ny hiaina mandrakizay. Nikomy tamin’i Jehovah Andriamanitra anefa izy ireo ka voaroaka tao amin’ny zaridainan’i Edena. Izay tian’izy ireo no nataony ary tsy nisy zavatra noraharahainy mihitsy, na izay hahasoa ny taranany aza. Lasa tsy lavorary izy ireo ka tsy afaka niaina mandrakizay.—Genesisy 2:15–3:24.
Niady mafy tamin’ny fiainana i Adama sy Eva tany ivelan’ilay zaridaina. Rehefa niteraka ny zanany voalohany anefa izy ireo, dia nataony hoe Kaina na “Zavatra Novokarina” ny anarany. Hoy i Eva tamin’izay: “Tera-dahy aho noho ny fanampian’i Jehovah.” Ny tenin’i Jehovah tao amin’ilay zaridaina angamba no tao an-tsainy. Nilaza i Jehovah tamin’izay fa hisy vehivavy iray hanana “taranaka”, ary io taranaka io no handringana an’ilay anjely ratsy nitarika azy ireo hanota. (Genesisy 3:15; 4:1) Nieritreritra àry ve i Eva hoe izy ilay vehivavy ary i Kaina ilay “taranaka”?
Diso hevitra izy raha izany no tao an-tsainy. Vao mainka loza aza raha izany no nampidirin’izy mivady tao an-tsain’i Kaina. Mety ho nahatonga azy hirehareha tsy amin’antony mantsy izany. Nanan-janakalahy faharoa i Eva tatỳ aoriana, nefa tsy nanao teny nandokadoka hoatran’ny tamin’i Kaina. Nataon’izy ireo hoe Abela ny anarany. Mety hidika hoe “Fofonaina” na “Zava-poana” izany. (Genesisy 4:2) Tsy nanantena zavatra firy tamin’i Abela, toy ny tamin’i Kaina, angamba izy ireo matoa nataony an’izany ny anarany.
Misy zavatra azon’ny ray aman-dreny ianarana avy amin’ireo ray aman-dreny voalohany ireo. Tsy tokony hiteny na hanao zavatra mety hahatonga ny zanany ho tia tena sy hirehareha ary hanambony tena izy ireo. Tokony hampiany kosa izy ireo mba hifandray tsara amin’i Jehovah Andriamanitra sy ho tia azy. Mampalahelo fa tsy nanao tsara ny andraikiny i Adama sy Eva. Soa ihany fa misy fanantenana ho an’ny taranany.
Mety ho nampianatra asa an’i Kaina sy Abela i Adama tamin’izy ireo mbola kely, mba hahaizan’izy ireo hamelona fianakaviana. Lasa mpamboly àry i Kaina, fa i Abela kosa mpiandry ondry.
Nisy zavatra tsara lavitra noho izany anefa nataon’i Abela. Niezaka hanana finoana izy nandritra ny taona maro. Izany ilay noresahin’i Paoly tatỳ aoriana. Eritrereto ange e! Tsy mba nisy olona tsara azon’i Abela notahafina mihitsy tamin’izany. Ahoana àry no nahatonga azy hino an’i Jehovah Andriamanitra? Ireto misy zavatra telo mety ho nanampy azy:
Ny zavatra noforonin’i Jehovah.
Marina fa nanozona ny tany i Jehovah, ka lasa tsy dia namokatra izy io noho ny tsilo sy ahidratsy. Na izany aza, dia mbola namokatra sakafo be dia be niveloman’i Abela sy ny fianakaviana ihany izy io. Tsy nozonin’i Jehovah koa ny biby, toy ny vorona sy ny trondro. Tsy nozoniny ny tendrombohitra, farihy, renirano, ranomasina, lanitra, rahona, masoandro, volana, ary kintana. Hitan’i Abela tamin’izay rehetra nojereny àry fa be fitiavana sy manam-pahendrena ary tsara toetra i Jehovah, ilay namorona ny zava-drehetra. (Romanina 1:20) Nisaintsaina an’izany rehetra izany izy ka lasa nanana finoana.
Azo antoka fa nieritreritra momba an’i Jehovah i Abela. Eritrereto ange izy niandry ny ondriny e! Toy ny fanaon’ny mpiandry ondry, dia mety ho nila nandeha an-tongotra be izy mba hitadiavana izay tsara indrindra ilain’ny ondriny. Nentiny namakivaky havoana sy lohasaha angamba izy ireo mba hahitany ahi-maitso sy toerana ialokalofana ary dobo. Mety ho niampitampita renirano mihitsy aza izy ireo. Ny ondry no toa tsy mahavita tena indrindra amin’ny biby rehetra. Toy ny hoe noforonina mba hisy olona hitarika sy hiaro foana izy ireo. Mety ho nieritreritra àry i Abela fa nila mpiaro sy mpitarika ary mpikarakara koa izy, dia i Jehovah. Hendry sy mahery lavitra noho ny olona mantsy i Jehovah. Azo antoka fa niresaka an’izany tamin’ny vavaka izy ka vao mainka lasa nanana finoana.
Lasa nino an’ilay Mpamorona be fitiavana i Abela rehefa nandinika ny zavaboary
Ny zavatra nampanantenain’i Jehovah.
Tsy maintsy ho notantarain’i Adama sy Eva tamin’ny zanany ny antony nandroahana azy ireo tao amin’ny zaridainan’i Edena. Be dia be mihitsy àry ny zavatra azon’i Abela nosaintsainina.
Nilaza i Jehovah fa ho voaozona ny tany. Hitan’i Abela tanteraka izany satria lasa nisy tsilo sy ahidratsy naniry tamin’ny tany. Nilaza koa i Jehovah fa hanaintaina i Eva rehefa bevohoka sy hiteraka. Hitan’i Abela tanteraka izany rehefa niteraka ny zandriny i Eva. Efa tsinjon’i Jehovah koa fa haniry mafy ho tian’ny vadiny sy hokarakarainy i Eva, ary i Adama kosa hanjaka aminy. Izany tokoa no nitranga ary tsikaritr’i Abela izany. Hitany fa marina daholo izay nolazain’i Jehovah. Lasa nino àry izy fa ho tanteraka ilay tenin’i Jehovah hoe hisy “taranaka” iray hanafoana ny ratsy rehetra nanomboka tany Edena.—Genesisy 3:15-19.
Ny mpanompon’i Jehovah.
Marina fa tsy nisy olona tsara azon’i Abela notahafina. Tsy ny olona ihany anefa no zavaboary manan-tsaina teto an-tany tamin’izany. Nisy anjely manana toerana ambony atao hoe kerobima koa tetỳ. Niambina ny lalana nankany amin’ilay zaridaina izy ireo ary nisy lelan-tsabatra nirehitra sy nihodinkodina tsy an-kijanona teo akaikiny. Tsy tian’i Jehovah hiditra tany intsony mantsy i Adama sy Eva ary ny zanany.—Genesisy 3:24.
Alao sary an-tsaina ange i Abela nitazana an’ireo anjely ireo tamin’izy mbola kely e! Nitafy vatan’olombelona izy ireo ary hita hoe matanjaka be. Nahavariana be koa angamba ny nahita an’ilay ‘sabatra’ nirehitra sy nihodinkodina. Tsy hoe leo akory ireo anjely ireo ka nisy fotoana tsy niambina an’ilay lalana intsony. Hitan’i Abela teo foana izy ireo rehefa nihalehibe izy. Nandeha teny ny volana sy ny taona fa mbola nijanona teo foana ireo anjely matanjaka sy manan-tsaina ireo. Lasa fantatr’i Abela àry fa hay i Jehovah Andriamanitra manana mpanompo manao ny marina sy tsy mivadika aminy. Hitany hoe nankatò an’i Jehovah ireo kerobima ireo, fa tsy mba toy ny fianakaviany. Azo antoka fa vao mainka izany nahatonga azy hanana finoana.
Hitan’i Abela hoe nankatò an’i Jehovah foana sy tsy nivadika taminy mihitsy ny kerobima
Lasa nahalala an’i Jehovah i Abela rehefa nandinika ny zavaboariny sy ny ohatra navelan’ny mpanompony ary nisaintsaina ny fampanantenany. Nampitombo ny finoany izany. Be dia be àry ny zavatra azontsika ianarana avy amin’i Abela, ka toy ny miteny amintsika izy. Mety hampahery ny tanora ny mahafantatra fa afaka ny hino an’i Jehovah izy ireo, na manao izany ny fianakaviany na tsia. Be dia be koa ny zavatra afaka mampitombo ny finoantsika. Mahita ny hakanton’ny zavaboary sy ny ohatra navelan’ireo olona be dia be nanam-pinoana isika, sady manana ny Baiboly iray manontolo.
NAHOANA NO TSARA KOKOA NY FANATITRA NATAON’I ABELA?
Vao mainka i Abela nino an’i Jehovah foana ka tiany haseho tamin’ny zavatra nataony izany. Inona anefa no azony omena an’ilay Mpamorona an’izao rehetra izao? Tsy mila fanomezana na fanampiana avy amin’ny olombelona mantsy izy. Takatr’i Abela anefa tatỳ aoriana fa raha manome izay tsara indrindra ananany fotsiny izy ary ataony amin’ny fo manontolo izany, dia efa faly i Jehovah, ilay Rainy be fitiavana any an-danitra.
Nanomana fanatitra ho an’i Jehovah àry i Abela. Nifantina ny tsara indrindra tamin’ny ondriny izy, dia izay teraka voalohany, ka izay hena noheveriny fa tsara indrindra no nataony fanatitra. Nanomana fanatitra avy amin’ny zavatra namboleny koa i Kaina, satria te hotahin’Andriamanitra sy hahazo sitraka aminy. Rehefa samy nanolotra ny azy anefa izy ireo, dia niharihary fa tsy nitovy ny antony nanaovan’izy ireo an’ilay izy.
Nanao fanatitra i Abela satria nino an’i Jehovah. Tsy mba hoatr’izany i Kaina
Mety ho nampiasa alitara sy afo izy ireo rehefa nanao fanatitra, ary angamba nataony hitan’ireo kerobima izany. Ireo anjely ireo mantsy no hany solontenan’i Jehovah tetỳ an-tany tamin’izany. Ahoana no fahitan’i Jehovah ny fanatitr’izy ireo? Hoy ny Genesisy 4:4: “Nankasitrahan’i Jehovah i Abela sy ny fanatiny.” Tsy lazain’ny Baiboly ny fomba nampisehoany an’izany. Nahoana anefa no nankasitrahany ny fanatitr’i Abela?
Ilay zavatra nataony fanatitra mihitsy ve no tiany? Ondry mbola velona no nataon’i Abela fanatitra ary nalatsany ny rany. Nieritreritra angamba izy fa tena sarobidy ny fanatitra toy izany. Tsy fantatsika anefa izay tao an-tsainy. Efa taona maro taorian’i Abela mantsy i Jehovah vao nandidy ny hanaovana fanatitra ondry tsy misy kilema, mba hampisehoana fa hanao sorona ny Zanany izy. Nantsoina hoe “Zanak’ondrin’Andriamanitra” io Zanany lavorary izay nandatsaka ny rany io. (Jaona 1:29; Eksodosy 12:5-7) Tsy fantatr’i Abela anefa izany rehetra izany.
Azo antoka kosa fa ny tsara indrindra nananany no nomen’i Abela. Tsy ilay fanatitra ihany anefa no nankasitrahan’i Jehovah fa i Abela koa. Tia sady nino an’i Jehovah mantsy izy ka izany no nahatonga azy hanao fanatitra.
‘Tsy nankasitrahan’i Jehovah kosa i Kaina sy ny fanatiny.’ (Genesisy 4:5) Tsy hoe ratsy akory ny zavatra nataony fanatitra, satria na i Jehovah aza tatỳ aoriana nilaza fa azo atao fanatitra ny vokatry ny tany. (Levitikosy 6:14, 15) Milaza kosa ny Baiboly fa “ratsy ny nataony.” (1 Jaona 3:12) Nitovy toe-tsaina amin’ny olona maro amin’izao i Kaina. Nieritreritra izy fa raha mody tia an’Andriamanitra etỳ ivelany fotsiny izy dia efa ampy izay. Nibaribary tamin’ny zavatra nataony, tsy ela taorian’izay, fa tsy tena nino an’i Jehovah izy sady tsy tena tia azy.
Fantatr’i Kaina fa tsy nankasitrahan’i Jehovah ny fanatiny. Tsy mba niezaka nanahaka an’i Abela anefa izy, fa vao mainka tezitra be taminy. Hitan’i Jehovah ny tany am-pony ka niezaka nanitsy azy foana izy. Nampitandrina azy i Jehovah fa hanao fahotana lehibe izy raha tsy miova, fa raha miova kosa dia “hisandratra.”—Genesisy 4:6, 7.
Tsy noraharahain’i Kaina ny tenin’i Jehovah. Nasainy niaraka taminy ho any an-tsaha ilay zandriny dia nanaiky satria tsy niahiahy azy. Rehefa tonga tany izy ireo, dia novonoin’i Kaina izy ka maty. (Genesisy 4:8) I Abela àry no olona voalohany nampijaliana sy maty noho ny fivavahana. Efa maty izy fa mbola tsy tapitra mihitsy ny tantarany.
Toy ny hoe mitaraina amin’i Jehovah Andriamanitra ny ran’i Abela mba hamaly faty an’i Kaina. Nampihatra ny rariny tokoa Andriamanitra ka nanasazy an’i Kaina noho ny ratsy nataony. (Genesisy 4:9-12) Toy ny miteny amintsika i Abela, satria hitantsika ao amin’ny Baiboly ny fomba nampisehoany finoana. Fohy ihany ny androm-piainany raha oharina amin’ny an’ny olona tamin’izany. Zato taona teo ho eo angamba mantsy izy dia maty. Nampifaly an’i Jehovah foana anefa izy. Fantany talohan’ny nahafatesany fa tia sy nankasitraka azy i Jehovah, ilay Rainy any an-danitra. (Hebreo 11:4) Azo antoka àry fa tadidin’i Jehovah izy ka hatsangany amin’ny maty rehefa ho lasa Paradisa ny tany. (Jaona 5:28, 29) Hihaona amin’i Abela ianao rehefa tonga izany, raha mihaino azy ka miezaka manahaka ny finoany.
^ feh. 8 Misy hevitra hoe manome taranaka ao amin’ilay hoe ‘manorina an’izao tontolo izao.’ Misy ifandraisany amin’ny taranak’olombelona voalohany indrindra àry io teny io. Nahoana anefa i Jesosy no nanonona an’i Abela fa tsy i Kaina, nefa i Kaina no taranak’olombelona voalohany indrindra? Nanao fanahy iniana nikomy tamin’i Jehovah Andriamanitra i Kaina raha jerena ny nataony sy ny safidiny. Tsy mendrika ny havotana sy hatsangana amin’ny maty àry izy, toy ny ray aman-dreniny ihany.
Tahafo ny Finoan’i Abela